Hyundai ရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ကား တစ်စီးဖြစ်တဲ့ Elantra N TCR ! – MyMedia Myanmar
Hyundai ရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ကား တစ်စီးဖြစ်တဲ့ Elantra N TCR !
Hyundai ကုမ္ပဏီရဲ့ Motorsport ကတော့ တော်တော်လေးကို အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ ကားတွေနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ချပြထား လေ့ရှိတာဖြစ်ပြီး Veloster N TCR တုန်းကလည်း နာမည်ကြီးခဲ့တာ ဖြစ်ကာ အခုဆိုရင် နောက်ထပ် မျိုးဆက်သစ် ကားတစ်စီးကို လမ်း ကြောင်း ပေါ်မှာ စတင်မြင်တွေ့ လာရဖို့ ရှိနေပါပြီ။ Hyundai ရဲ့ Customer Racing Department ကနေ ဖန်တီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Hyundai Elantra N TCR ကတော့ လေးနာရီသာ ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ IMSA Michelin Pilot Challenge ပြိုင်ပွဲ ကို စတင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်တော့မှာ ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကားကတော့ အမေရိက ရဲ့ Motorsport ပွဲဦးထွက်အနေနဲ့ အခုပြိုင်ပွဲကို ယှဉ် ပြိုင်မှာ ဖြစ်ကာ လာမယ့် သောကြာနေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပြီး Daytona International Speedway မှာ စတင် ပြီးကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Bryan Herta Autosport နဲ့ အတူ စတင်ပြီး ပွဲဦးထွက် အဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၈ တုန်းက စတင် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Hyundai အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မြောက်အမေရိကဆိုင်ရာ Touring Car ပြိုင်ပွဲ ကို အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ထားနိုင်တာ ဖြစ်ပြီး 2020 ရဲ့ Manufacturers Title အပါ အဝင် TCR Championship ကိုပါ ပြန်လည် ရယူလာဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်လာနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Bryan Herta ကတော့ သူတို့အနေနဲ့ All New Elantra N TCR ကားဟာ လက်ရှိ Hyundai ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် မြင့် TCR Lineup ထဲကို စိတ် လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံး နောက်ထပ် ကားတစ်စီး အနေနဲ့ ဝင်ရောက် လာတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်း အခုလိုမျိုး လမ်းကြောင်း အသစ်အပေါ်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စိန်ခေါ်နိုင်မယ့် ကားတစ်စီးကို ထပ်ပေါင်း ထည့်နိုင်ဖို့ခဲ့တဲ့ အတွက် တကယ် ကို ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ ဆိုထား ခဲ့ပြီး Elantra N TCR အနေနဲ့လည်း မြန်ဆန်ပြီး မောင်းနှင်ရတာလည်း ထူးခြား ကောင်းမွန်နေမှာဖြစ်ကာ Hyundai N တွေမှာ ရလေ့ရှိတဲ့ စွမ်းဆောင် ရည် အတိုင်းပဲ စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးနိုင်လိမ့်မယ် လို့ Herta က တော့ ယုံကြည်‌နေပါတယ်။ အသင်း အနေနဲ့ Elantra N TCR နှစ်စီး နဲ့ Veloster N TCR တို့ကို Racing Category တစ်ခု အတွင်း ထည့်သွင်း ‌သွားတော့မှာ ဖြစ်ပြီး ၃.၅၆ မိုင် အကွာ အဝေးရှိတဲ့ အခု လမ်းကြောင်းမှာတော့အကွေ့ပေါင်း ၁၂ ခုနဲ့ Oval Sections‌ တွေ လိုနေရာ မျိုးတွေမှာလည်း ၃၁ ဒီဂရီ အမြင့် တွေ ပါဝင် နေပါသေးတယ်။ ကား ရဲ့ နံပါတ် ၃၃ နဲ့ ၉၈ တို့ကိုတော့ Ryan Norman နဲ့ Parker Chase တို့က အသီးသီး မောင်းနှင် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကားတွေကတော့ အပြောင်းအလဲတွေ နဲ့ အတူ အသစ် ထွက် ပေါ်လာမယ့် Hyundai Elantra N Road Car ရဲ့ Racing Versions နှစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အပြောင်းအလဲတွေ ထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ အရာကတော့ ကြီးမားလှတဲ့ Track-Spec Fenders တွေ ဖြစ်ပြီး Aerodynamics Bodywork တွေကိုလည်း အများအပြား မြင်တွေ့ ရဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၁၈ လက်မ×၁၀ လက်မအရွယ် Braid ဘီးတွေကလည်း Six-Piston Calipers တွေ အရှေ့ဘက် မှာ ဖုံးအုပ်ထားပြီး အနောက် ဘက်မှာတော့ Two-Piston Units တွေကိုထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ်။ ကားရဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်း အနေနဲ့ကတော့ 2.0 Liter Turbocharged Four-Cylinder Engine ကို အသုံး ပြုထားပြီး 350Sp အထိ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Six-Speed Sequential Transmission စနစ်နဲ့ အတူ Front-Wheel Drive အနေနဲ့ ပါ ရရှိနိုင်မှာပါ။ Suspension စနစ် ကလည်း ပုံမှန်အတိုင်း Layout ကိုမှ Road Car တုန်းက ပုံစံ အတိုင်း ပဲပွဲထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ကာ ချိန်ဆမှုတွေ ကိုလည်း မကြာမခဏ ပြုလုပ် ထားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထား ပါသေးတယ်။ ကားရဲ့ စုစုပေါင်းအလေးချိန်ကတော့ ယာဉ်မောင်းရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် အပါအဝင် ၂,၇၈၉ ပေါင် လောက်ပဲ ရှိမှာပါ။ ဒါကြောင့် အခုလို မကြာခင် မျက်ဝါး ထင်ထင်မြင်တွေ့လာရတော့မယ့် Hyundai Elantra N အကြောင်းကို ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ကြဖို့ လိုအပ် နေသေးပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ လကတည်းက Pre-Production ပုံစံ တွေကိုမြင်တွေ့ထားရတာ ကြောင့် အတော်လေးတော့ စိတ်ဝင်စား ဖို့ ကောင်းနေခဲ့ပြီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post Hyundai ရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ကား တစ်စီးဖြစ်တဲ့ Elantra N TCR ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-26T15:30:46+06:30January 26th, 2021|MYCARS MYANMAR|